Siyaasi Cali Guray Oo Sheegay Inuu Jamaal Siiyey Exit-kii uu Siyaasadda Kaga Bixi lahaa – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Siyaasi Cali Guray ayaa maanta shir jaraa’id uu ku qabtay magaaladda Hargeysa waxaanu kaga hadlay arimo dhawr ah oo la xidhiidha garabkii uu ka tirsanaa ee xisbiga UCID iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed ee wakhtigan hadda la joogo.
Cali Guray ayaa sheegay inuu ka baxay garabkii Jamaal Cali Xuseen ka dib markii uu sheegay inuu arin ay isku ogaayeen uu ka baxay.
Cali Guray ayaa si ba’an u weeraray Gudoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, waxaanu sheegay in xisbiga UCID uu bakhtiyey.
Cali Guray ayaa sidoo kale sheegay in Jaamal Cali Xuseen uu isaga siiyey halkii uu kaga bixi lahaa siyaasadda Somaliland, balse waxa uu sheegay inuu codkiisa siin doono Gudoomiyaha xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi.
Halkan ka daawo shirka jaraa’id ee Cali Guray oo aanu ka soo xiganay:
Xisbiga WADDANI Oo Deeq Raashin iyo Biyo ah Oo ay Kaga Qayb-galayaa Gurmadka Abaaraaha Ku Wareejiyey Badhasaabka Gobolka Togdheer